Adobe, Twitter na usoro mgbasa ozi na-ekwukarị na-aga ọgụ dị omimi? : Martin Vrijland
Adobe, Twitter na usoro mgbasa ozi na-ekwukarị na-aga ọgụ dị omimi?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 6 November 2019	• 0 Comments
Isi mmalite: aolcdn.com
In akwụkwọ ọhụrụ m M na-akọwa etu a ga-esi tinye olulu miri dị iche iche na mgbasa ozi, kamakwa n’igwe mgbasa ozi na ebe a na-akparịta ụka, m na-akọwara etu usoro mgbasa ozi si nwee teknụzụ niile iji tinye akụkọ n'ọrụ ruo ọtụtụ iri afọ. Na ọtụtụ mmadụ na-eleghara nke a anya dị ka izu ọjọọ, n'okpuru aghụghọ na e kwesịrị inwe onye n’etiti ha onye akọ na uche ya ga-ekwu, na-eleghara njikọ nke ihe ọmụma anya. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na akwụkwọ akụkọ na-enweta ozi ahụ site na isi 1 na otu isi ahụ bụ, dịka ọmụmaatụ, General Dutch Press Office nke John de Mol, mgbe ahụ ọ bụ naanị obere otu n'ime nke ahụ ANP kwesịrị ịma banyere ụdị ọrụ ahụ. N'ime otu ahụ kwa, ikewa ihe ọmụma nwere ike ijide n'aka na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole kwesịrị ịma gbasara aghụghọ na aghụghọ ndị nwere ike ịdị.
A na-atụkarị m ụjọ ma tụkwasịnụ obi ike na ntụkwasị obi dị ukwuu na mgbasa ozi, na-esokwa ndị a na-akpọte anya. Ọ bụrụ na mmeghachi omume mbụ gị banyere ihe akụkọ ka na-awụ akpata oyi ma ọ bụ "masịrị gị," mgbe ahụ ị chọpụtabeghị oge a na-eme ka ndị mmadụ na-eche ihu, iwu siri ike na arụmọrụ akọnuche. Ndị mmadụ na-amaja ikwu okwu banyere 'ịmara' ma kwenye nke ọma na mgbe ụfọdụ, arụ ọrụ ọkọlọtọ ụgha emeela, mana nke ahụ dị anya ma ọ bụghị n'ezie na Netherlands, n'ihi na Dutch bụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na anyị niile nwere onyinye dị na ya. mgbasa ozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọtụtụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị oke egwu na The Hague. Ndị dị ka Jeroen Pauw na Matthijs van Nieuwkerk ka nọ ugbu a anyị ahụghị na ha bụ ndị njikwa nghọta zuru oke bụ ndị nwere mkparịta ụka iji mepụta ọdịdị nkatọ na iwepu ohere nke ịchọpụta ókè aghụghọ ahụ dị. . Anyị ekwenyeghị na enwere ike ịchịkwa mmegide.
Ọ bụrụ na, na arụ ọrụ uche na onye ọ bụla na-enyo enyo bụ akụkọ ụgha, ị na-enwe mkparịta ụka siri ike, ya na ndị ọkachamara siri ike na ọtụtụ mmụọ, mgbe ahụ onye ọ bụla ga-ekwere na ya. Ọ bụrụ n’ị na-ekwugharị akụkọ ahụ na ụlọ ọrụ redio niile, na akwụkwọ akụkọ na akụkọ niile, onye ọ bụla kwenyesiri ike. A na - eme ka ikike nke ime ka mmadụ kwenye site na ihe a na - akpọ isi nke usoro mgbasa ozi ndị ọzọ, niile na - agbachi nkịtị mgbe a na - arụ ọrụ ọgụgụ isi. Ha na-etinye uche nke ihe akpọrọ na-akpọte mana na-elekwasị anya n'ihe dịka 911, JFK, ọdịda ọnwa na ụdị akụkọ ochie ndị ọzọ ma ọ bụ 'akụkọ nsụhọ'; ya mere idebe ndị na-amụ anya n'eziokwu na ọnọdụ dị egwu banyere (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị) ejiri akụkọ akụkọ adịgboroja mepụta iji mezuo usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Medialọ mgbasa ozi na usoro mgbasa ozi ọzọ dị ebe ahụ iji mee ka ndị mmadụ ghara ịma ụzọ 'Wag the Dog' (ihe nkiri sitere na 1997) nke usoro mgbasa ozi yana mkpokọta Truman Show (ihe nkiri sitere na 1998) nke ejidere ndị mmadụ. "Thezọ kachasị mma iji chịkwaa mmegide bụ idu ya n'onwe gị"
Adobe, ụlọ ọrụ nke na-ewete ngwanrọ mmezi nke, dịka ọmụmaatụ, enwere ike idozi fim, kwupụtara ụbọchị tupu ụnyaahụ imekorita na Twitter na New York Times. Ha chọrọ iwebata ụkpụrụ izizi nke ọdịnaya. N'ime akwụkwọ m ekwuputala na nke a na-abịa, ọ nwere ike ịdị ka atụmatụ dị egwu, nke nwere ike igbochi "ụlọ ọrụ akụkọ akụkọ Russia" na-emeghị nke adịgboroja iji nyere Donald Trump aka na ntuli aka na-esote, mana Onye obula nke ji igodo ya bu otu ihe kwesiri, nwere ike kwuo na vidiyo obula sitere na “ihe a nwaputara” bu ezigbo ya ma na onye obula enye nsogbu na-ekwu na obu akụkọ ojoo. N'ezie; anyi aghaghi ihu ihe nlere di nkpa nke anakpo n’abia n’abia iji bia lebara nsogbu a anya. Anyị nwere ike iji nke ahụ tụnyere ntakịrị na saịtị mgbasa ozi adịgboroja mara mma, nke ezubere iji nwee ike ikwu “anya saịtị akụkọ adịgboroja dị adị, yabụ anyị nwere ịtọlite ​​ụfọdụ ụdị 'ozi eziokwu' Facebook na mmachi mgbasa ozi mmekọrịta". Standardkpụrụ ezi ọhụụ a agaghị abụ karịa nke a: George Orwell 1984 ministri nke asambodo eziokwu.
Ugbu a, n’enweghị mgbagha, a ga-akpọrọ ndị ọkachamara a kpọrọ òkù ọzọ na tebụl Jeroen Pauw iji kọwaa etu ezigbo akara a si dị mkpa, mana ọ bụrụ na ndị isi ụlọ ọrụ akụkọ na-enweta koodu nzuzo iji nabata akụkọ adịgboroja ha niile, icheta ọbụghị ihe ị nwetara site na etu esi enweta ya, ọ na - eme ka ihe ọ bụla sikwuo ike banyere imepụta akụkọ adịgboroja.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: engadget.com
Ugboro abụọ igbu ọchụ nke Gina na Marinus na cinema Proné Groningen
Tags: Adobe, ezigbo ọkọlọtọ, content, deepfakes, agba, etiti, ozi ọma, ọhụrụ, oge, Twitter, York
" Akwụkwọ ọhụrụ Martin Vrijland 'Ihe mere dịka anyị siri hụ na ọ dị njikere' maka nnyefe!
Ọkaiwu na-ahụ maka ịgba égbè Philippe Schol na akụkọ ndebe akụkọ ụgha Schiphol »
Nleta nile: 13.865.607